Somalia: Ninkii Isku Qarxiyay Afaafka Hore Ee Madaarka Muqdisho Oo Farriin U Soo Diray Gollaha Guurtida Somaliland Ka Hor Intii Aanu Is Qarxin. - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ninkii Isku Qarxiyay Afaafka Hore Ee Madaarka Muqdisho Oo Farriin U...
Idaacadda Radio Andalus ee taageerta Xarakada Alshabaab ee dalka Soomaaliya ayaa habeen hore fiidkii baahisay cajalad cod dardaaran oo uu ka tagay Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqaanay Saalax Badbaado intii aannu dorraad gelinkii hore isku qarxin afaafka hore ee Madaarka Magaalada Muqdisho, codkaasi dardaaranka ah oo uu farriin ugu dirayo xukuumadda dalkaasi Soomaaliya, odayaasha Soomaalida iyo waliba gaar ahaan Xildhibaanada Golaha Guurtida Somaliland.
Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) oo ka mid ahaan jiray xildhibaanada Maamulka Muqdisho dawladdii Sheekh Shariif dhalasho ahaanna kasoo jeeday Somaliland ayaa waxa uu ka tagay cajalad cod ah oo laga sii duubay intii aanu is qarxin oo naftiisa halaagin waxaana cajaladda codkiisa ah Alshabaab baahisay ku jira dardaaranno kala duwan oo uu qaar ka mid ah kula hadlayo Somaliland iyo golayaasheeda sharci dejinta, waxaanan halkan ku soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah dardaarankaasi oo aad ud heeraa oo aynaan soo wada qaadan Karin waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: “Magacaygu waa Saalax Nuux Ismaaciil, hawshan istishaahiga ah ee aan u socdaa waa hawl aan Ilaahay ugu dhawaanayo.
Waana waajib Ilaahay nagu leeyahay oo aan gudanayno. Waajibkaa Ilaahay na saarayna waa kii ahaa in gaalada lala dagaalamo oo lagula dagaalamo maal, naf iyo carraba. Waxaan u dooranay in aan shahaado qaadano oo aan istish-haado qaadano waa camalka ugu wanaagsan jihaadka oo marka horeba wada wanaagsan balse waa ka ugu wanaagsan. Waxa weeyi in aanaan difaac ku jirin ee aan weerar galno oo aan gaalada curyaaminno. Waxaan arrinkan kaga dayanayaa dad hore oo wanaagsanaa anna waxaan doonayaa in na lagaga daydo.
Hadaba inta aanaan hawshan qaban oo aanay dhiiggayaga iyo lafahayagu burburin waxaan doonayaa in aan dardaaran u jeediyo. Waa baaq aan iska sii horraysiinayo. Waxaan ku baaqaynaa in dadku ilaahay u soo noqdaan oo rumeeyaan, intii aannu weerarka ku dilno wixii ka soo hadha muslimiinta dambe ayaa dili doonta wixii ka toobad keena ee Ilaahay waafajiyona waxaan u rajaynayaa wanaag. Dadka waxyeelada lagu hayo ee aan jihaadi Karin iyo kuwan gaaladu adeegsanayso ee murtadiinta ah ayaan u baaqayaa in ay diinta u soo noqdaan oo jihaadaan”.
Xildhibaan Hore Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) oo dardaarankiisa sii wataa waxa uu farriin u soo diray odayaasha Golaha Guurtida Somaliland, waxaanu yidhi: “Waxaan farriin u dirayaa odayaasha jihaad diidka ah, oo kufaar raaca ah, oo gadh casta ah oo gadh madoobaha ah, oo murxay oo tukubaya, oo Guurtida Hargeysa ugu badan tahay, waxa ku jira boqol jir baa ku jira. Boqol jirkaasi waxa uu Hargeysa kaga khudbadeeyey Anigu kursigaan la saaxiib ahay, waxa uu yidhi anigu Ingiriiskii nabad doon baan ahaayoo markii la lahaa hala kiciyo, ha kicinina ayaan lahaa buu yidhi odaygaasi, waxa uu lahaa ingiriiska daaya, dawladdii Lixdankii iyo kuwii kala dambeeyeyna daaya baan lahaa buu yidhi isaga oo sheegay in uu kursiga la saaxiib ahaa oo ilaashanayay. Odaygaasi waxa uu yidhi tii Siyaad Barrena daaya baan lahaa buu yidhi. Waa 93-kii markan uu hadlayaa oo waxa uu lahaa taa Cabdiraxmaan Tuur ee maanta joogtana daya baan leeyahay buu lahaa. Ta ka dambaysana daaya baan leeyahay buu yidhi. Ninkaasi isaga oo boqolka ka badan da’diisu waxa uu maanta ku jiraa Guurtida Somaliland. haddana wali waxa uu wadaa oo leeyaay kursigaan la saaxiib ahee daaya. Odayadeenii sidaas ayay u badan yihiin ee waxaan xasuusinayaa qisada oday Ingiriiskii tababary ooh al hays u lahaa Left Right (Bidix Midig) oo markii Ingiriiskii ka tagayna sidaa uun Left Right u lahaa. Waxa la yidhi markii uu gaboobay ee tii Alle u timid ayaa lagu yidhi Ashahaado markaasuu yidhi (Left Right, Left Right) oo ah marka ciidamada la ciyaarsiinayo ee la leeyahay bidix midig. Waxaanay laftii ka baxday isaga oo left Right daasuun haya. Odayaasha Somaalida ee maanta gaalo raaca ah ee koofiyadaha loo gal galinayo ee la leeyahay Hargeysaanu hore Guurti ugu samaynay maantana Koonfur baanu odayaal guurti ah u samaynaynaa waxaan leeyahay wallaahi leeft raayt (Left Right) ama wax ka liita ayay naftu idinkaga baxaysaa”.
Somaliland: Khilaafka Soo Guuxayay In Mudo Ah Oo Su Cagu Dhiganaye Bartamaha Xisbiga Waddani+ Isqabadka Siyaasiynta Xisbiga + Qosolka Cirro + Shrweynaha Xisbiga